Garsoore Maraga: Waan u dhimaneynaa difaacidda sharciga dalka Kenya - BBC News Somali
Garsoore Maraga: Waan u dhimaneynaa difaacidda sharciga dalka Kenya
Codbixiyeyaal safar dhaadheer u galay doorashada Kenya
Tan iyo intii maxkamadda sare ee Kenya ay bishan 1-deedii ku dhawaaqday in la laalay natiijada doorashadii madaxtinimo ee dhacday, ayaa waxaa isa soo tarayay waxyaabaha kasoo cusboonaanaya arrimaha doorashada ku celiska ah.
Balse wax kasta oo soo cusboonaada waxa ay mugdi sii galinayaan in doorasho muran la'aan ah ay qabsoonto markale.
Guddiga doorashada Kenya ee IEBC ayaa horay ugu dhawaaqay in 17-ka bisha Oktoobar la qabanayo doorashada ku celiska ah, balse xisbiga mucaaradka ah ee NASA ayaa ku gooddiyay in aysan ka qaybgali doonin doorashadaasi illaa wax laga badalo qaab dhismeedka guddiga iyo waliba habka doorashada loo qabanayo.
Waqtiga ay dhacayso doorashada Kenya oo la shaaciyay
Raila Odinga oo ah hoggaamiyaha mucaaradka ayaa shaaciyay magacyada dhawr iyo tobon mas'uul oo tirsan IEBC oo uu codsaday in laga saaro hawsha guddiga, kuna eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen in doorashada lagu shubto sida ay maxkamadda xukuntay.
Boor muujinaya sawirada Raila Odinga iyo Kolonso Musyoka oo u tartamaya madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenka Kenya
War maanta soo kordhay oo laga yaabo in uu xiriir la leeyahay cabashada Raila ayaa ah in guddoomiyaha IEBC Wafula Chibukati uu shaqada ka joojiyay agaasimihii tiknoolajiyadda James Muhanga oo ka mid ahaa 11 kii qof ee Raila uu codsaday in ay shaqada laga fariisiiyo. Ninkan waxa uu badalay agaasimihii hore ee la dilay ee magaciisu ahaa Chris Msando, kaas oo si arxan darro ah loo dilay maalmo ka hor doorashadii dhacday 8-dii Agoosto.
Balse cabaqaddii ugu weynayd maanta ayay soo ifbaxday kadib markii wakaaladda wararka ee Reuters ay baahisay war ku saabsan in shirkaddii maamulaysay doorashada ee OT-Morpho ee Faransiiska laga leeyahay ay sheegtay in aysan diyaarin karin qalabkii doorashada mudada loo cayimay in ay doorashada dhacdo.
Warqad ku astaysan 18-ka bishan Sabtembar, oo shirkadda u dirtay IEBC ayaa lagu sheegay in loo baahanyahay in dib loo rakibo aaladaha casriga ah ee doorashada loo adeegsado, hawshaasina aysan ku qabsoomi karin mudada 17-ka Oktoobar ah ee doorashada loo asteeyay.
Illaa 45,000 oo kumbuyuutar oo lagu shubay barnaamijyo casri ah sida suul-saarka iyo aqoonsiga sawirka ayaa horay guddiga doorashada loogu wareejiyay si loogu maamulo codbixinta.
Shaqada ugu muhiimsan ee kale ee lagu qabanayay qalabkan ayaa ahaa in lagu soo gudbiyo natiijada doorashada. Balse waa halkaas meesha ay wax ka qaldameen, maxkamadda sarana waxa ay sheegtay in qalabkan aanan lagu qabanin hawshii loogu talogalay.
Xisbiga NASA ayaa farta ku fiiqaya shirkaddan iyo tan kale ee daabacday waraaqaha codbixinta ee Al-Khureyr ee Imaaraatka laga leeyahay, waxayna sheegeen in ay heshiis hoose oo qarsoodi ah la galeen xisbiga talada haya ee Jubilee si loogu shubto doorashada, eedeyntaas oo ay Jubilee iyo shirkadahaba iska bari yeeleen.
David Maraga waa xaakimka maxkamadda sare ee laalay natiijada doorashada
Maanta taageerayaasha xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa banaanbax ka dhigay maxkamadda sare horteeda, iyaga oo maxkamadda ku eedeeyay in ay dhacday guushoodii.
Balse xaakimka sare David Maraga oo shir jaraa'id qabtay waxyar kadib mudaaharaadka ayaa sheegay in uusan marnaba ka waaban doonin xaqa, xitaa haddii ay tahay in uu naftiisa waayo, wuxuuna ka digay in dadka weerarka afka ah ku qaadaya xaakimiinta ay mas'uul ka noqon doonaan haddii uu dhib soo gaaro dadka garsoorka ka shaqeeya ama xubnaha qoysaskooda.
"Xaakimiinta maxkamadda sare iyo dadka ka shaqeeya garsoorka ayaa la weeraray, waa la handaday, si qaldan ayaana baraha bulshada loogu bahdilay, siyaasiyiin sarsare ayaana ka sheegay hadalo aad u qaldan, waxayna sheegeen in ay cashar noo dhigi doonaan" ayuu yiri xaakimka oo eedeyn u jeediyay taliyaha booliiska Joseph Boinnet oo uu sheegay in uu iska dhago mariyay wargalin badan oo ay ku wargaliyeen dhibaatooyin loo geysanayo garsoorka.
Waxa uu mudaaharaadkan dhacayaa maalin ka hor xiliga la filayo in maxkamadda ay soo daabacdo go'aankii ay doorashada ku laashay oo dhamaystiran.
Xukunka maxkamadda ayaa laga soo dhaweeyay meelo badan oo adduunyada ka mid ah, dadkii ugu dambeeyay ee go'aanka ka hadlay waxaa ka mid ah Hillary Clinton oo ahayd musharixii madaxtinimada Maraykanka ee laga guuleystay, waxayna sheegtay in shirkadda lagu magacaabo Cambridge Analytica oo ka mid ahayd shirkadihii ku hawlanaa doorashooyinka Kenya ay mas'uul ka ahayd in ay ku shubasho dhacdo, iyada oo sidoo kale sheegtay in isla shirkaddan ay gacan togaalaysay aftidii Brixit iyo doorashii madaxtinimo ee Maraykanka ee uu ku guulaystay Donald Trump.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa inkasta oo uu aqbalay xukunka maxkamadda, haddane waxa uu sheegay in xaakimiinta ay yihiin burcad, kuna eedeeyay in ay sameeyeen afgambi garsoor wax uu ku tilmaamay.
Uhuru Kenyatta ayaa garsoorayaasha maxkamadda sare ku tilmaamay 'koox burcad ah'
Illaa 339 dacwadood oo doorashada la xiriira ayaa la yaala maxkamadaha Kenya, kuwaas oo musharixiin doorashada looga badiyay ay ku doodayaan in looga shubtay codka, waxaana ka mid ah xildhibaano, barasaabyo iyo dad u tartamay kursiga golaha deegaanka.
Si kastaba ha ahaatee waxaa aad looga wardhawrayaa xogta ku jirta xukunka maxkamadda sare ee dhamaystiran ee bari la filayo in la shaaciyo.
Dhageyso, Guddiga doorashada Kenya oo ka hadlay go'aankii maxkamadda sare
Muuqaal, Muuqaal ku saabsan ahmiyadda doorashada Kenya
Dhageyso, Xaaladda ganacsiga Soomaalida Kisumu ee dalka Kenya